पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ? « Etajakhabar
पुरुषका नजरमा ठूला स्त:न किन आकर्षक मानिन्छन् ?
प्रकाशित मिति : २३ श्रावण २०७७, शुक्रबार १९:२६
काठमाडौं । महिलाको आकर्षण संग जोडिएका विभिन्न अंगहरु जस्तै अनुहारको बनोट, शरीरको बनावट, रुपरंग संगै उनीहरुको छातिमा रहेको बाहिरी अंग स्त:नले पनि पूरुषलाई आकर्षित गर्ने गर्दछ । प्राय विदेशी समाजमा महिलामा रहेको स्त:नको विकसित रुप अर्थात ठूला स्त:नलाई आकर्षक मानिन्छन् । विस्तारै नेपाली समाजले पनि विदेशी नक्कल गरेको पाइन्छ । जसरी विदेशी समाजका पुरुषहरू ठूला स्त:न र ठूलो हीप प्रति आकर्षित हुने गर्दछन् त्यसरी नै यहाँ पनि त्यसको सिको गर्न थालेको देखिन्छ । यसैले पनि होला महिलाको सौन्दर्य तथा आत्मसम्मान स्त:न तथा हीप सँग जोडिएको संस्कृतिको विकास हुन थालेको ।
आफ्नो स्त:नको आकारको विषयमा सबैभन्दा ठूलो चिन्ता वा चासो केवल आफ्नो यौ:न साथीलाई आकर्षिक गर्ने नै हो । तर यौ:नका विषयमा पूर्ण ज्ञान नभएका केहि व्यक्ति ठूलो स्त:न भएकी महिलाले भोली बच्चा जन्मे पश्चात स्त:नपान गराउँदा बढी मात्रामा दूध आउँछ र बच्चा स्वस्थ रहन्छ भन्ने भ्रममा समेद परेको देखिन्छ । तर दूधको मात्रामा सानो ठूलो स्त:नको यो प्रकारको भूमिका हुँदैन भन्छन् चिकित्सकहरु ।
तर पनि सं:भोगमा स्त:नको छुट्टै महत्व रहेको हुन्छ । स्त:नको स्पर्शले पुरुषलाई यौ:न उ:त्तेजना दिन्छ भने महिलालाई पनि यौ:न आनन्द प्रदान गर्दछ । स्त:नको सम्पूर्ण भाग यौ:न सं’बेदन’शील भएता पनि यसको मुण्टो (एरोला) तथा त्यसको वरिपरिको भाग विशेष संबेदनशील हुन्छ । यसको स्पर्शमा महिलाहरुले आनन्ददायी अनुभूति गर्दछन् । महिलालाई स्त:नको आकार सानो वा ठूलो जे भए पनि यौ:न सुख तथा आनन्द पाउने कुरामा कुनै फरक पार्दैन ।
यसर्थ स्त:न केहि सानो हुँदैमा सं’भोगमा कम आनन्द आउला भनेर चिन्ता लिनु आवश्यक छैन । कतिपयलाई बैबाहिक जीवनमा असर पर्छ कि भन्ने चिन्ता हुन्छ । यो त त्यो व्यक्तिले विवाह गर्ने व्यक्तिसंगको सम्बन्ध र उसको अपेक्षामा निर्भर रहन्छ । यहि समाजमा ठूला आकारका स्त:न भएका कति महिलाका बैवाहिक जीवन सुमधुर नहुन सक्छन् भने कति साना स्त:न भएका महिलाको सुमधुर सम्बन्ध रहेको हुन सक्छ । स्त:नको आकार ठूलो वा सानो आफै मात्र यसको निर्णायक आधार होईन । यस सँग बाल्यकालमा उसले खाने गरेको पौष्टिक युक्त खानेकुरा तथा प्राकृतिक रुपमानै उसले लिएर आएको बंशाणुगत विशेषता पनि सानो ठूलोको विषयमा निर्भर रहन्छ ।
हामीलाई प्रकृतिले दिएका कतिपय कुरामा चित्त नबुझे पनि त्यसमा केही गर्न सकिने अवस्था नरहन सक्छ । यसर्थ आवश्यकता विहिन रुपमा पीर लिएर बस्नु कुनै बुद्धिमानी होईन । आफ्नो मन बलियो बनाई आफ्नो शा’रीरिक स्वरुपप्रति सजक भई आफूमा भएको अन्य प्रतिभा तथा व्यक्तित्व विकासमा जोड दिँदै अगाडि बढ्नु सबैभन्दा बुद्धिमानी हो ।
केही ठूला देखिने स्त:न प्रति पूरुषको आकर्षण बढ्नु भनेको क्षणिक तथा प्राप्ती नहुन्जेलको आकर्षण मात्र हो । अझ यसलाई भन्नुपर्दा देखावटी आकर्षण मात्र हो भन्दा पनि फरक पर्दैन । जुन क्षणिक हुन्छ । सानै स्त:न भएका महिलाले पनि आवश्यक रोलप्लेको माध्यमबाट पुरुषलाई पूर्ण यौ:नमा स’न्तुष्टि दिन सक्छन् । देख्दा र कल्पना गर्दाका बखदमात्र ठूलो स्त:न प्रति पूरुष आकर्षित भएका हुने गर्दछन् । यसर्थ यौ:न सन्तुष्टि र यौ:न जीवनमा ठूलो या सानो स्त:नको खासै भिन्नता पाइदैन ।
स्त: न बढाउन चाहनुहुन्छ ? यस्ता उपाय अपनाउनुहोस् !
शिशुको लागि अमृत मानिने स्त:न उ’त्तेजित अंगपनि हो । स्त:न शिशुका लागि दूध बनाउन मात्र होइन् । यौ:नका दृष्टिकोणले पनि महत्त्वपूर्ण अङ्ग हो । किशोरावस्थामा पुगेपछि हार्मोनको प्रभावले युवतीहरूमा स्त:नको विकास तीव्र गतिमा हुन थाल्छ ।
स्त:नको वृद्धि धेरैजसोमा ११ वर्षको उमेरमा सुरु भएर १५ वर्षमा पूरा हुन्छ । स्त:नको आकार तथा आकृतिको महिलाको मानसिकतामा महत्वपूर्ण प्रभाव हुन सक्छ । स्त:नसँग आत्मसम्मानको कुरा पनि जोडिएको हुन्छ । यसको आकार वा आकृतिका बारेमा स्वास्थ्यभन्दा सुन्दरताका कारणले बढी चिन्ता गरिने कुरा अनुसन्धानहरूले देखाएका छन् ।
व्यक्तिअनुरूप स्त:नको स्वरूप एवं आकारमा धेरै विविधता पाइन्छ । स्त:नमा भएका तन्तुका आधारमा यो कुनै ठूलो वा सानो हुन्छ । सामान्यतयाः स्त:नको आकार वा स्वरूपलाई प्रभाव पार्ने प्रमुख कुरा निम्न छन्ः
स्त:नका तन्तुको मात्रा, पारिवारिक इतिहास, उमेर, तौल बढ्नु वा घट्नु, स्त:नको छालाको मोटाइ वा तन्कन सक्ने गुण, रागरस हार्मोनहरूको प्रभाव । स्त:नको विकासका क्रममा यसको आकार र कडापनमा पनि परिवर्तन हुन्छ । किशोरावस्थामा स्त:नको तन्तु बढ्दै जाँदा यो गोलाकार हुन्छ र त्यति बेला यसका तन्तुहरू पनि निकै खाँदिएका हुनाले वयस्क उमेरका महिलाभन्दा कडा हुन्छ ।
उमेर बढ्दै गएपछि स्त:नको खँदिलोपन पनि घट्दै जाने हुनाले पहिलेको तुलनामा नरम हुँदै जान्छ । स्त:नको आकारमा वंशाणुगत प्रभाव एकातिर हुन्छ भने अर्कातिर पोषणको । यी दुवैको संयुक्त प्रभाव स्त:नको आकार निर्धारणमा महत्वपूर्ण छ । आमा र दिदीहरूको स्त:नको आकार प्रकारसँग धेरै मिल्नु वंशाणुगत कारण हुनसक्छ ।
तपाईंले आफूलाई पातली भन्नुभए पनि तौल लेख्नुभएको छैन । शरीरको तौलअनुसार अन्य भाग जस्तो ठयाक्कै नहुने भए पनि तौल कम हुँदाको स्त:न पनि सानो हुने स्थिति रहन्छ । हामी शरीरको बडी मास इन्डेक्स बोसो कति छ हेरेर तौल सामान्य भन्दा कम वा बढी भएको निक्यौल निकाल्छौं । सामान्यतः हामी वयस्क व्यक्तिको उचाइ र तौलका आधारमा शरीरमा कति ‘बोसो’ छ नाप्छौं ।
यसलाई बोसो भनिन्छ । हुन त यो पद्धतिका पनि आफ्नै सीमितताहरू छन् । यो बोसो यदि १८ दशमलव ५ देखि २४ दशमलव ९ सम्म छ भने त्यसलाई सामान्य तौल मानिन्छ । यो २५ देखि २९ दशमलव ९ सम्म भएको स्थितिमा तौल बढी भएको मानिन्छ भने यो ३० भन्दा बढी भएको स्थितिमा ‘मोटो’ बोसो भनिन्छ । त्यसैगरी १८ दशमलव ५ भन्दा कम दक्ष भएको व्यक्तिलाई कम तौल भएको मानिन्छ ।
तपाईंको उचाइ ५ दशमलव ४ इन्च र तौल ४५ किलोग्राम छ, भने तपाईंको दक्ष यस्तै १७ हुन्छ । यो तौल सामान्यभन्दा कम हो । त्यसैले पोषणमा ध्यान दिनु राम्रो हुन्छ । पहिले तौल बढी भएर पछि घट्न गएको स्थितिमा पनि स्त:नको आकारमा कमी आउनुका साथै कसिलोपनमा पनि कमी आउन सक्छ अर्थात् नरम हुनसक्छ । तौलमा थोरैमात्र उतार चढाव हुँदा स्त:नमा परिवर्तन नदेखिन सक्छ ।
घरेलु उपाय गरेर स्त:नको आकारलाई उल्लेख्य रूपमा प्रभावकारी तवरले बढाउन सकिएला जस्तो लाग्दैन, तर कतिपय समाजमा ठूला आकारका स्त:नलाई आकर्षक मानिने भएकाले यसलाई ठूलो बनाउन महिलामाथि दबाब हुन्छ ।
सौन्दर्यसँग स्त:नको आकार तथा आकृति जोडिने भएकाले त्यस्तो भएको हुनसक्छ । त्यसै कारणले संसारभर नै स्त:नलाई बढाउन वा आकर्षक देखाउन विभिन्न विधि प्रयोग हुने गरिएको देखिन्छ । छोटकरीमा केही प्रमुख विधिको चर्चा गरौं ।
क्रिम प्रयोग गरेर स्त:न मालिसले आकार बढ्ने दाबी गरिए पनि यसले ‘स्थायी’ रूपमा आकार बढ्छ भन्ने कुरा प्रमाणित छैन । केही कसरतले छातीको मांसपेशीलाई बलियो र ठूलो बनाउँछ र यस्तो स्थितिमा ठूलो भए जस्तो लाग्न सक्छ, तर त्यसले ‘कपको आकार’ लाई परिवर्तन गर्दैन ।
विभिन्न रसायनिक औषधियुक्त मल्हमको प्रयोग अर्को उपाय हो । उत्पादनकर्ताको भनाइमा यस्ता मल्हमले सीधै स्त:नको तन्तु तथा कोषमा कार्य गरेर त्यसको वृद्धि गराउँछ ।
हाल बढाउने विभिन्न किसिमका खाने च क्की विश्व बजारमा उपलब्ध हुन थालेका छन् ।
जडिबुटी पनि भएको दाबी गरिएका ती औ षधि निर्माणकर्ताहरूको भनाइमा यसको सफलता निकै छ । जे सुकै दाबी गरिए पनि अमेरिकी संस्थाहरुले यस्ता कुरा प्रमाणित गरेका छन् ।
त्यसबाहेक आकारमा वृद्धि गर्न पम्पको प्रयोग पनि निकै चर्चामा छ । श ल्यक्रिया एउटा अर्को प्रचलित उपाय हो । शल्यचिकित्साले नकारात्मक प्रभावबिना नै नतिजा दिन सक्ने दाबी गरिए पनि त्यसको दीर्घकालीन प्रभावका बारेमा यसै भन्न सकिने स्थिति भने छैन ।
शल्य चिकित्सा गरेर आकार बढाउन सकिन्छ, तर अत्यधिक खर्चका साथै शल्य चिकित्साको कुप्रभावको असर खप्नुपर्ने हुनसक्छ ।
तपाईंले फोम भएको ब्रा अर्थात् थुनचोली प्रयोग गर्नुभएको छ । स्त:न कसैलाई देखाउनुपर्ने अङ्ग नभै छोपेरै राख्नुपर्ने अङ्ग हो । यसलाई आकर्षक देखाउने अन्य उपाय जस्तैः थुनचोली ब्राभित्र कपडा, कपास वा यस्तै कुनै वस्तुको प्रयोग गर्ने वा स्त:नलाई माथितिर उचाल्ने साधनहरूले आकर्षण थप्छ ।
श्रीमान्लाई तपाईंको स्त:नका सम्बन्धमा कुनै गुनासो छैन भने यो एउटा राम्रो उपाय हुनसक्छ । स्त:न सानै भए पनि त्यसले यौ:न सुख दिन दूध उत्पादन गर्न सक्छ । एजेन्सीको सहयोगमा
गोरखा । गोरखाका एक युवाको विदेशमा मृत्यु भएको छ । गोरखा शहिद लखन गाउँपालिका–६ स्थित
सांसद वामदेवलाई प्रत्यक्ष भेट्न नपाइने, यस्तो छ कारण
काठमाडौ । संघीय संसदको राष्ट्रिय सभा सदस्य मनोनयन भएपछि माननीय माननीय बामदेव गौतमलाई प्रत्यक्ष भेट्न
कैलालीकी एक महिला पत्रकार जंगलमा मृ’त भेटिइन्
काठमाडौ । कैलालीमा कार्यरत एक महिला पत्रकार मृ त फेला परेकी छन्। जिल्लाको घोडाघोडी नगरपालिका
काठमाडौं उपत्यकामा मात्रै ८५९ संक्रमित
काठमाडौं । नेपालमा पछिल्लो २४ घण्टामा अहिलेसम्मकै सबैभन्दा उच्च कोरोना भाइरस (कोभिड १९) संक्रमित भएका
ट्रम्पमाथि यौ’न दुर्व्य’व’हारको आरोप, जिब्रोद्धारा यौ’न दुर्व्य’व’हार गरेको खुलासा
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार १०:१२
युरोपका सदस्य देशमा कोरोनाको नयाँ सक्रमितको संख्यामा दोब्बरले वृद्धि
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०८:३०
प्रेममा धोका पाउनु भएको छ भने, यी उपायहरु अपनाउनुस् जस्ले तपाईँलाई कहिल्यै डिप्रेसनमा जान दिंदैन
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०७:०८
एउटा यस्तो मन्दिर छ जहाँ दाजुभाई दिदीबहिनीसँग गएभने बिबाह हुन्छ
२ आश्विन २०७७, शुक्रबार ०६:५३